Shabeellaha Hoose - Wikipedia
Xeebta magaalada Marka
Meesha kaga taalo Soomaaliya.
25,285 km2 (9,763 sq mi)
1 399 868
55.36/km2 (143.4/sq mi)
Shabeellaha Hoose (Af Soomaali : Lower Shebelle, Template:Language with name and transliteration‎) waa gobol ka mid ah deegaanada koonfurta Soomaaliya.
2 Wax soosaarka
3 Lahjadaha looga hadlo gobolka
Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku yaalaa koonfurta dalka Soomaaliya waxaana magaalo madax u ah Magaalada Marka, dhaqaalihiisa wuxuu ku tiirsanyahay beeraha, xoola iyo Kaluumeysiga. Gobolkaan waxa uu xaduud la yeeyahay gobolada kala ah Banaadir, Shabeellaha Dhexe, Bay, Jubadda Dhexe iyo Badweynta Hindiya. Waxaa mara Wabiga Shabeelle. Shabeellaha Hoose wuxuu gobol ahaa waagii hore1884 kadib talyaniga ayaa exbaadir ku daray
Run ahaantii Gobolkaan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu quruxda badan dalka Soomaaliya. sababtoo ah wuxuu leeyahay deegaaano aad u ballaaaran oo doog ah, sidoo kale waxaa ku yaalo beeraha waawayn ee loo yaqaano aseendooyinka kuwaasoo inta badan dacalka ku haaya webiga shabelle oo dhex mara gobolka, deegaannada ayaa ah kuwo aad usoo jiita dadka dalxiisayaasha ah. deegaannada dalxiiska ku wacan waxaan ka xusi karnaa Beeraha Afgooye taasoo isku xirta caasimada iyo xarunta gobolka ee Marka. Sidoo kale waxaa lagu yaqaan kaluumeysiga oo aay dadka aad uga helaan. woxoo leeyahy dhul aad u qurux badan iyo xeebo indhahaaga soo jiidanaayo.
gobolka shabeellaha hoose waa gobolka ugu horeeya dalka Soomaaliya ee dhanka wax soo saarka beeraha. Gobolkani waxa uu RABBI ku manaystay khayraad fara badan oo isugu jira bad iyo barriba. waxaa ku yaalo beerah ugu badan dalka kuwaasoo laga soo saaro dalaga kala duwan ee laga isicmaalo inta badan wadankeenna. gobolka waxa uu caan ku yahay beeraha qudaarta, qudaarta ayaa ah miro u baahan biyo joogto ah oo lagu waraabiyo sidaasi daraadeed ayaa ILAAH waxa uu gobolkani ugu deeqay wabi biyihiisu qul qulaaan bilaha sanadka oo dhan taasna waxay sahashay in la abuurto beerahaas waqti kasto. qudaarta iyo noocyada kale ee fawaakihda ee gobolka kasoo baxdo waxaan ka xusi karnaa, yaanyada, basasha, barbarooniga, kabsar caleen, basbaaska, bocorka, iyo waxyaabaha kale ee la midka ah. sidoo kale dhanka fawaakihda ama qudaarta aan la karin ayuu gobolku caan ku yahay, sida Cambaha, Muuska,Isbaandheyska, Canabka. Babaayga, iyo Qaraha. waxaana xusid mudan in dalka dhaqaale xoog badan kasoo galo dhoofinta Moooska oo gobolkan kaliya laga soo saaaro intiisa badan. sidoo kale waxsoo saarka gobolkan waxaa ka mida, kheyraadka badda oo ah mid ka mida ilaha dhaqaale ee gobolkani caanka ku yahay. waxaa uu gobolkani leeyahay xeeb dheer oo kalummeysatadu ka jalaabtaaan.
Lahjadaha looga hadlo gobolka
Gobolkaan waxaa looga hadlaa lahjado badan ku waasoo ku xiran qabiilada ay kasoo kala jeedaan. Lahjadaha looga hadlo waxaa ka mid ah afka maxaa tiri, af baraawe, maay maayga iyo afka marka iyo afaf kale oo yaryar waxaana kala dega qabaa,ilada kala ah Shiikhaal Jaziira, Shiikhaal Gendershe, Biimaal,Digil iyo mmirifle,12 koofi ,wacadan,wadalaan iyo murusade
Degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waa 1
↑ "Nuqul Archive" (PDF). Embassy of The Federal Democratic Republic of Ethiopia. Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 14 July 2014. Soo qaatay 11 July 2014. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ "Nuqul Archive". Central Intelligence Agency. Waxaa laga kaydiyay the original 1 Bisha Todobaad 2016. Soo qaatay 6 December 2013. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Hubi qiimaynta taariikhda: |archive-date= (caawin)
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Shabeellaha Hoose.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shabeellaha_Hoose&oldid=223942"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Nofeembar 2021, marka ee eheed 20:35.